Tetibola 2020: Nifampihaino ny Vondron’ny Mpandraharaha avy amin’ny SIM sy ireo Loholon’i Madagasikara
mercredi, 04 décembre 2019 21:52
Niaraka nifampidinika ilay lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana taona 2020, tao amin’ny Lapan’ny Antenimierandoholona Anosikely androany alarobia 04 desambra ireo Loholon’i Madagasikara, izay notarihin’ny Filohany Rivo Rakotovao, sy ny vondron’ny mpandraharaha ao amin’ny SIM na (Sendikan’ny Indostria Malagasy) izay notarihin’ny filohany Hassim Amiraly.
Naneho ireo olana mianjady sy ny hetahetan’izy ireo ny vondron’ny mpandraharaha, ary indrindra ny fiatraikan’ity lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana ity raha laniana. Nambaran’izy ireo fa mamono ny Indostria malagasy, izay tena efa mitsipozipozy nandritra ny taona maro manoloana ny fanafarana entana avy any ivelany izay mandoa haba ambany dia ambany tokoa, ary koa mamono ny mpandraharaha anatiny raha tsy hilaza ny manjo ireo mpandraharaha eo amin’ny sehatrin’ny savony.
Nangatahan’izy ireo ny hampiakarana izany haba izany ho 20%, ary mampanantena izy ireo fa raha tanteraka izany dia afaka hamokatra ho an’ny vahoaka Malagasy rehetra izy ireo, ary afaka hanangana orinasa maro manerana ny Nosy hanomezana asa ny Malagasy.
Nanambara kosa ireo mpandraharaha eo amin’ny sehatrin’ny varimbazaha sy katsaka fa tokony ho jerena ny haba 20% izay takiana amin’izy ireo ao anatin’io lalàna mifehy ny fitantanam-bola-panjakana io satria dia mavesatra amin’izy ireo tokoa izany, ka mitarika any amin’ny fihenan’ny famokarana sy fanjifana satria mitarika ny fampiakarana ny vidim-bokatra izany ary miteraka fiantraikany ratsy ho an’ireo mpanjifa ary mamono ihany koa ny tantsaha sy ny mpiompy .
Manoloana izany dia nanambara ireo Loholona nandray fitenenana fa tsikaritra tokoa ny fihenana sy ny fikatonan’ny Indostria Malagasy ary ny firoboroboan’ireo vokatra avy any ivelany izay amidy amin’ny vidiny mora eto an-toerana. Saingy manoloana ny olana izay mianjady an’ireto mpandraharaha ireto dia tsy tokony ho hadinoina hoy ireto Loholona fa tokony hijery ihany koa ny tombotsoan’ny mpanjifa izy ireo eo amin’ny lafiny vidin'entana ary ny fahafahana mamokatra manerana ny Nosy.
Nanambara ny Filohan’ny Antenimierandoholona fa zava-dehibe izao dinidika izao satria mitondra fanazavana misimisy kokoa ho an’ireto Loholona hahafahan’izy ireo mandinika lalindalina kokoa ny zava-misy mialohan’ny handinihan’izy ireo izany lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana taona 2020 izany.
Fanaovan-tsavony: Ankasitrahan’ny orinasa SOBA ny habantseranana 10% alaina akora fototra
Herinaratra - Tetikasa « Sahofika »: Tontosa ny fakan-kevitra teto Vakinankaratra »